काठमाडौंको मेयरदेखि रोल्पाको वडाध्यक्षसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा, कुन-कुन चिन्हबाट ल्याए मत? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
काठमाडौंको मेयरदेखि रोल्पाको वडाध्यक्षसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा, कुन-कुन चिन्हबाट ल्याए मत?
वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह चुनावको अहिले मतगणना भइरहेको छ। मतगणनाका क्रममा काठमाडौं महानगरदेखि रोल्पाको वडासम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा छ।
उनीहरूको चर्चा मात्रै छैन मत पनि निकै राम्रो आएको छ। काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका बालेन शाह अहिलेसम्मको मतगणनामा अग्रस्थानमा छन्। पूराना पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई पछि पार्दै उनले काठमाडौंमा मत बटुलिरहेका छन्। उनको चुनाव चिन्ह लौरो हो।
काठमाडौंको मेयरमा उठेका अर्का उम्मेदवार सुमन सायमीले आँखीझ्याल चिन्ह लिएका छन्। मतगणनामा उनी प्रतिष्पर्धामा उत्रिन नसके पनि उल्लेख मत पाइरहेका छन्।
बालेनले काठमाडौंमा अग्रता लिएको लौरो चिन्ह देशभरि फैलिएको छ। धरान उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अहिलेसम्म दोस्रो स्थान कायम गरिरहेका छन्। उनको चुनाव चिन्ह पनि लौरो नै हो।
काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा लौरो चुनाव चिन्ह भएका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमित खरेलले अहिलेसम्म तेस्रो बढी मत पाएका छन्।
रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर २मा स्वतन्त्र उम्मेदवार नेत्रबहादुर गिरीले वडाध्यक्ष जितेका छन्। उनको चुनाव चिन्ह लौरो थियो।
काठमाडौंपछि अर्को सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको मतगणना चितवनको भरतपुरको हो। भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल मेयर उम्मेदवार बनेकी छन्। उनीसँग एमालेका विजय सुवेदीको प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ।
रेनु र विजयपछि भरतपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले तेस्रो मत पाइरहेका छन्। उनको चुनाव चिन्ह भुइँकटहर हो।
विराटनगर महानगरको मेयर र उपमेयरमा उमेश यादव र नमिता न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरू दुबैले लालटिन चुनाव चिन्ह रोजेका छन्। यादव र न्यौपानेले अग्रता लिन नसके पनि केही मत पाएका छन्।
धनगढीको मेयरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेसका नृप वडलाई पछि पारिरहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले पनि आँप चुनाव चिन्ह लिएका छन्।
जनकपुर उपमहानगरको मेयरमा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका मनोज साहले अग्रता लिइरहेका छन्। उनले घन्टाघर चुनाव चिन्ह पाएका छन्। आँप चिन्ह पाएका अर्का उम्मेदवार बलराम महतोले पनि सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार लालकिशोर साहको भन्दा बढी मत पाएका छन्।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको मेयरमा उठेका प्रह्लादकुमार क्षेत्रीले जेब्रा चिन्ह पाएका छन्।
उनले पनि अहिले मेयरमा अग्रता लिइरहेका छन्।
बुटवल-१ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका नरेन्द्र बस्नेतले पुतली चिन्ह पाएका थिए।
अछामको कमल बजार नगरपालिका वडा नम्बर १ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार भक्तबहादुर बोहोराले वडाध्यक्ष जितेका छन्। उनको चुनाव चिन्ह आँप थियो।
ललितपुर महानगरको वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष उम्मेदवार नरसिंह व्यञ्जनकारको चुनाव चिन्ह पुतली हो। ८१ वर्षीय व्यञ्जनकार त्यही चिन्हबाट भोट ल्याएर ११ औं पटक वडाध्यक्ष बन्ने योजनामा छन्।
आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विभिन्न चिन्ह दिने गरेको छ। यसपालि काठमाडौंमा मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएकामध्ये ३५ जनाले विभिन्न चिन्ह लिएका थिए।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १, २०७९, ०१:५०:००
धन्यवाद सभाका लागि खुलामञ्च पुग्यो मेयर बालेन शाहको विजय जुलुस (तस्बिरहरू)